secondary Menu ကို
ခါးကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ။ အိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်း။ အကောင်းဆုံးဗေဒကုသမှုကဘာတွေလဲ။
ကီထိုင်: အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကဘာတွေလဲ။ ကြောက်မက်ဘွယ်အကြံပေးချက်များထွက်စစ်ဆေး!
ဖြည့်စွက်	 10 ဒီဇင်ဘာလ 2018
Kimera: ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ ဘာဖွဲ့စည်းမှုလဲ။ တကယ်အလုပ်လုပ်ပါသလား ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့ကိုပြော!
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းသို့သွားပြီးမျှတသောအစားအစာကိုထိန်းသိမ်းထားသလား၊ အရက်နှင့်စီးကရက်များကိုမသုံးပါနှင့်၊ သင့်အတွက်အရည်အသွေးရှိသောအစားအစာဖြည့်စွက်ချက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ရည်မှန်းချက်သည်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်၊ သင်၏အဆီရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည် Kimera သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။
မင်းစပ်စုလား အောက်ပါခေါင်းစဉ်များတွင် Kimera အကြောင်းပိုမိုပြောပါမည်။ အဆုံးတိုင်အောင်ငါတို့နှင့်နေပါ။
အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူရမည်နည်း
Kimera ကို ၀ ယ်ယူခြင်းသည် Onofre ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သာပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်၎င်းကိုဖြည့်စွက်စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ဆေးဆိုင်များတွင်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Onofre ဆေးဆိုင် သင်အိမ်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းအပြင်၊ အတုနှင့်လိမ်လည်ခြင်းမှကင်းဝေးပြီး ၀ ယ်သည့်အချိန်ခန့်မှန်းသည့်အချိန်အတွင်းအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်အရောင်းမြှင့်တင်မှုများကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
Kimera ၀ ယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်အရေးကြီးသောပြissueနာမှာမည်သည့်အကြွေးကဒ်ဖြင့်မဆိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး Onofre သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Onofre drugstore တွင်စျေး ၀ ယ်ခြင်းကလုံးဝလုံခြုံမှုရှိသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ပြီးလျှို့ဝှက်လိမ့်မည်။ စိတ်မပူပါနှင့်!
Onofre တွင် thermogenic Kimera ကိုရှာဖွေခြင်းအပြင် Kimera Woman နှင့် Extreme ကိုလည်းသင်ရရှိနိုင်သည်။ အားလုံးသီးသန့်အကျိုးခံစားခွင့်အပြည့်အဝ။
သင်၏ Kimera ကို ၀ ယ်ယူရန်အောက်တွင်နှိပ်ပါ။
Kimera သည်စျေးကွက်ရှိအခြားဖြည့်စွက်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းရှိသည်။ မင်းအခုဝယ်လိုက်ရင်မင်းဘယ်လောက်ပေးရမလည်းဆိုတာဒီမှာပါ။
ကောင်းပြီ, ငါတို့ပြီးသားဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, Onofre ဒီထုတ်ကုန်ဝယ်ယူရန်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး, ၎င်း၏စျေးနှုန်းသည်အမှန်တကယ်သည်အခြားတည်ထောင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးပြား ၆၀ ပါတဲ့သေတ္တာတစ်လုံးကို ၀ ယ်ရင်မင်းကပေးလိမ့်မယ် R ကို $ 68,99, ဒါမှမဟုတ်သင် R ကို $234,50 ကြိမ်ပိုနှစ်သက်လျှင်။
ဤဆိုက်တွင်ကြီးမားသောငွေပေးချေမှုအခြေအနေများရှိပြီးသင်ဘဏ်စာရင်း၊ ငွေသားသို့မဟုတ်ချက်လက်မှတ်ဖြင့်ငွေသားဖြင့်ငွေထုတ်။ Visa, Mastercard, American Express, Diners Club နှင့် Hipercard တို့ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်ကလစ် နှိပ်၍ သင်၏ကင်မရာကိုမကြာမီ ၀ ယ်ပါ
thermogenic Kimera ကဘာလဲ? သူဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သလဲ။
Kimera သည် thermogenic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသောသဘာဝဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုတာက Kimera ကိုသုံးပြီးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ရင်မင်းကကယ်လိုရီ ၅၀၀ ကိုမီးရှို့လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အတိုင်းအတူကယ်လိုရီ ၈၀၀ ကိုဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။
သင်သိဖို့လိုအပ်သည့်အခြားအချက်တစ်ခုမှာဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခြင်းခံထားမှသာလျှင်အားကစားရုံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာတိုးတက်စေသည်။ ၎င်းသည်ယခုလေ့ကျင့်ရန်စတင်ခြင်းနှင့်လိုအပ်မှုနည်းပါးသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များမှအားကစားသမားများ၊ ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများဖြစ်လာသောမည်သူမဆိုအတွက်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုလေးလံသောလေ့ကျင့်ရေးဝန်ကိုထမ်းဆောင်သူများအတွက်သင့်လျော်သည်။
Kimera ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်သီးသန့်ပုံသေနည်းဖြစ်သည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်။ စျေးကွက်ရှိအခြားဖြည့်စွက်မှုများတွင်သင်ရှာမတွေ့ပါ။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ၎င်းသည်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများမှပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းအားမည်သူမဆိုလက်တွေ့ကျကျယူဆောင်နိုင်ပြီးများသောအားဖြင့်လေးနက်သောတုံ့ပြန်မှုကိုမတွေ့ရပါ။
Kimera သည်ဆေးတောင့်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်သောက်သင့်ပါသည်။ တစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးရန်အကြံပြုပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်းမပြုမီမိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ မိနစ်။ ရလဒ်များကိုပထမအပတ်၌သိသာပြီးသားဖြစ်သည်။
???? သင်အမြဲအိပ်မက်မက်ခဲ့သောကိုယ်ခန္ဓာကိုလိုချင်ပါသလား။ ထိုဒေသတွင်းရှိအဆီများကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်စွမ်းအင်ပိုမိုလိုအပ်ပါသလား။ ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ Kimera ကိုယခု ၀ ယ်ပါ။
သင်၏စံနှုန်းမှာသင်၏ထုတ်ကုန်ကို drugofore website Onofre တွင်သာဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများနှင့်ရလဒ်များနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့အတွက်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤကုန်ပစ္စည်းကို Mercado Livre ကဲ့သို့သောစတိုးဆိုင်များတွင်သို့မဟုတ်ရောင်းသောနေရာများတွင်ရောင်းပါက၎င်းတို့သည်ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိပြီး၎င်းတို့ကိုဝယ်ယူခြင်းသည်သင်၏ဝယ်ယူမှုကိုအန္တရာယ်ပြုစေသည်။
မည်သည့်အစားအစာဖြည့်စွက်မှုမျိုးနည်းတူကင်မ်ရာသည်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ပြင်းထန်သောရောဂါများရှိသူများသည်ဆရာဝန်၏ကြီးကြပ်မှုမပါဘဲမသုံးသင့်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအလွန်ရှားပါးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ဖြစ်ပွားသောအခါသင့်အနေဖြင့်သင်၏ဇီဝြဖစ်တိုးမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်ဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။
thermogenic Kimera ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဒီအောင်မြင်သောထုတ်ကုန်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ သင်၏အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်၏ဘဝနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို Kimera မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုသင်သိလိမ့်မည်။ ထွက်ခွာသည်!
သင်၏ Kimera ကိုလုံခြုံစွာနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပျော်မွေ့ချင်ပါသလား။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
ဟုတ်ကဲ့ ... အကယ်၍ သင့်အားအကျိုးကျေးဇူးများစွာအမြန်နှင့်ပြတ်ပြတ်သားသားရလဒ်များကိုပေးမည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုလိုချင်လျှင် kimera ကိုစမ်းသင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ဒါဟာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးအလေးအနက်ထားပြီးသင်ရှာဖွေနေသောရလဒ်များကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးအပြင် Onofre နှင့်မလွှဲမရှောင်သာစျေးနှုန်းများဖြင့်သင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။
အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်၊ ဤထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ထောင်နှင့်ချီသောကျေနပ်ရောင့်ရဲနေသောလူများရှိနေကြသည်။ ကြိုးစားကြည့်ရအောင်?
Kimera ကိုသင်အရင်ကအသုံးပြုခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်သင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှတ်ချက်ပေးပါ။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိနေသေးလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းကိုချန်ထားပါ။ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။
အာဟာရပညာရှင် Larissa Scharf - CRN 21101878/P
Aromatherapist နှင့် Psychoanalyst အာဟာရပညာရှင်
Av.Abelardo Bueno 3300 အခန်း ၉၀၅
contato@larissascharf.com.br (၂၁) ၉၉၅၉၂၃၉၆၂
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုKimera: ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ အကျိုးကျေးဇူးများကားအဘယ်နည်း။ ဘာဖွဲ့စည်းမှုလဲ။ တကယ်အလုပ်လုပ်ပါသလား ငါတို့ရှိသမျှသည်သင်တို့ကိုပြော!"
24:2017 pm မှာမတ်လ 09, 09 - Edit
ဟယ်လိုငါနေ့တိုင်းပြေးနေတယ်၊ ​​ငါကင်မရာကိုသုံးလို့ရလားငါ့ကိုအကျိုးရနိုင်မလား။ သင်တန်းကောင်းတစ်ခုအစားအစာနှင့်အတူ။
5:2017 pm မှာပြီလ 02, 29 - Edit
မနက် ၆ နာရီမှာလေ့ကျင့်ပါ။ ညနေ ၄ နာရီခန့်မှာဒါမှမဟုတ် ၂ နာရီလောက်မှာတောင့် ၂ ပြားယူလို့ရပါသလား။
16:2017 pm မှာပြီလ 18, 46 - Edit
ဘယ်လောက်ယူတာလဲ ငါပိုဝယ်ချင်တယ်၊ ငါဘယ်လိုယူရမလဲမသိဘူး
24:2017 pm မှာပြီလ 16, 24 - Edit
ငါ trill မတိုင်မီနှစ်ခုတောင့ကိုယူနိုင်ပါ
21:2017 pm မှာမေလ 02, 14 - Edit
ဟဲလို! ငါနို့တိုက်နေပြီ၊ ကီမီရာကိုသောက်လို့ရနိုင်မလား။
22:2017 pm မှာမေလ 10, 16 - Edit
28:2017 pm မှာဇွန်လ 20, 46 - Edit
တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆေးပြား ၂ လုံးယူလို့ရပါသလား?
22:2017 pm မှာသြဂုတ်လ 13, 30 - Edit
12:2017 pm မှာစက်တင်ဘာလ 13, 29 - Edit
ဟင်။ ငါမကြာသေးခင်ကငါ့မြို့ကအားကစားရုံမှာစခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် (၂) အကြာတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင် Kimera ကိုဝယ်ခဲ့တယ်။ ယခုအချိန်အထိငါမူးဝြေခင်း, နှလုံးပြိုင်ကားခံစားခဲ့ရကြပြီမဟုတ်။ ငါအားကစားခန်းမမှာမစတင်မီငါအထွေထွေစစ်ဆေးမှုများခဲ့ဟုဆိုသည်။ အဲဒါကိုယူလိုသောအရာကိုအကြောင်း။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပူနွေးလာသည်နှင့်အမျှခွန်အားပိုများပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုခံစားရသည်။ ဤပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ အေရိုးဗစ်နှင့်ကြွက်သားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကြောင့်ငြီးငွေ့မည်မဟုတ်။ နောက်နေ့မှာလည်းငါနာကျင်မှုမခံစားရဘူး။ ငါတစ်နေ့လျှင်2ဆေးတောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။ ယခုငါတစ်နေ့လျှင် 1 တောင့နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။ နေ့လယ်စာမစားမှီနှင့်တစ် ဦး သင်တန်းမတိုင်မီတစ်။
ထိုက်တန်လျှင်? ကျနော့်အမြင်အရ! ယခုအချိန်အထိထုတ်ကုန်သည်၎င်း၏ကတိတော်များကိုအကောင်အထည်ဖော်နေပြီဖြစ်သည်။ သွားကြရအောင်
နောက်မှကြည့်ပါ ယနေ့ငါ ၈၃.၇ ကိုစတင်သောအခါငါ ၈၃.၃ ဖြစ်သည်။ ငါအားကစားရုံ၌စသောအခါငါ ၈၇.၉ ဖြစ်သည်
ငါက ၃ ရက်လောက်သောက်ပြီးပြီ။
20:2017 pm မှာစက်တင်ဘာလ 17, 31 - Edit
အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်၊ - Edit
Cintya mara da ရော့ခ်
10:2017 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 09, 36 - Edit
8:2018 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 11, 55 - Edit
Tamara - အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
15:2018 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 10, 19 - Edit
လေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ ခန့်သောက်သုံးရန်အကြံပြုသည်
1:2018 pm မှာမေလ 07, 45 - Edit
တစ်နာရီလျှင် ၂ တောင့်တောင့်ကိုကျွန်ုပ်သွားနိုင်သည်။
15:2018 pm မှာသြဂုတ်လ 21, 42 - Edit
ကောင်းသောညပါ။ ငါ Amato ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းအတွက်ယူ, Kimera အသုံးပြုမှုအပေါ်ကန့်သတ်ရှိပါသလား
26:2018 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 23, 29 - Edit
ငါတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆေးပြား ၂ လုံးသောက်နိုင်ပါသလား?
မှတ်ချက်လေး ပြန်ကြားချက် Cancel
Whey Protein - Hypertrophy၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများ
ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာစေသည့်အခြေခံအစားအစာများ - ၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သို့စားသုံးရမည်ကိုလေ့လာပါ။
Lipostabil - သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးများရှိပါက၎င်းသည်ဘာလဲ၊ အကျိုးရှိသည်ကိုသိရှိပါ။
Chickpeas - အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ရှု။ အိမ်၌ဤခဲဖွယ်စားဖွယ်များကိုမည်သို့ပြင်ဆင်နိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။
ပဲဟင်း: အမျိုးအစားများ, အရောင်များ, အာဟာရစားပွဲပေါ်မှာနှင့်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိ!
ကော်လာဂျင် - "Botox in Capsules" ဟုလည်းခေါ်သည့် hydrolyzed ကော်လာဂျင်ပါဝင်သောစူပါအစားအစာဖြည့်စွက်
Duratron - အမျိုးသားပြproblemsနာများကိုအဆုံးသတ်ရန်ကတိပေးသောသဘာဝထုတ်ကုန်။
မီးတောင် - ဘရာဇီးရှိအားကစားရုံများတွင်အောင်မြင်မှုများစွာရစေသော thermogenic cream ။
Functional Snacks - အစားအစာကိုမစားချင်သောသူများအတွက်ချက်နည်းများ။
Lavitan Woman: ဒီဖြည့်စွက်ချက်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေပါ။
Saxenda: ANVISA ထုတ်ပေးတဲ့ပါးလွှာတဲ့ဆေး။